Ciidamo dhac geysanayey oo Muqdisho ku dilay Askari | KEYDMEDIA ENGLISH
Labbo Nin oo ku labisan dareyska ciidamada dowladda ayaa degmada Waaberi ku dilay Askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Labbo nin oo la rumeysan yahay in ay ka mid yihiin ciidamada dowladda, ayaa askari ka tirsanaa ciidamada qalabka sidda, xalay ku dilay degmada Waaberi.
Ragga dilay askariga ayaa ku hubeysnaa qoryo Ak47 ah, iyagoo doonayey in ay marxuumka ka dhacaan taleefankiisa gacanta, taasoo uu ka biyo diidday, isla markaana sababtay in ay qeybaha sare ee jirkiisa kaga dhuftaan, rasaasta uu u geeriyooday.
Askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Jamaal Daahir Cali, waxaana todobaadkan gudihiisa uu ka soo laabtay fariisimada ay ciidamada dowladda ku leeyihiin Shabeelaha hoose, isagoo fasax nasiino ah u joogay xaafadiisa.
Raggii ka tirsanaa ciidamada ee dilay askariga, ayaa baxsaday, waxaana goobta yimid ciidamo boolis ah, oo ka socday saldhiga Waaberi, kuwaas oo sheegay in ay baaritaan ku hayaan askartii dilka geysatay.
Marxuum Jamaal Daahir, ayaa caan ka ahaa gudaha degmada Waaberi, halkaas oo uu ku qaatay inta badan nolashiisa, waxaana goobta uu falka dilka ah ka dhacay, isugu soo xoomay shacab fara badan, kuwaa oo aad uga xumaaday dilka loo gaystay askariga, iyagoo dalbaday in caddaalada la hor keeno kuwii dilay.
Amni darrada caasimadda ayaa maalinba maalinta ka danbeysa sii kordheysa, iyadoo aysan jirin cid ka jawaabeysa walaaca hareeyey shacabka, waana arrin keliftay in uu yaraado dhaq dhaqaaqa dadka ee xilliyada habeenkii, maaddaama indhaha la eeganayo amniga faraha ka sii baxaya.